Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Mpitari-bato vilam-bava !
INTY SY NDAY: Mpitari-bato vilam-bava !
Ny tontolon’ny tanora sy ny olana mianjady aminy. Io no vontoatin’ny resaka novelabelarin’ny filohampirenena Rajaonarimampianina tao anatin’ny fandaharana “fotoam-bita” fanaony isaky ny zoma. Tao anatin’izany no nilazany fa “mahatsapa ny olana atrehinareo tanora aho”.
Inona moa no mahagaga amin’izany? Ny mifanohitra amin’izany no mahagaga. Izany hoe “raha misy filohampirenena tsy mahatsapa ny olana atrehin’ny tanora, dia izay no mahagaga”. Ny olom-pirenena tsirairay koa ange ka mahatsapa an’izany e!
Raha ny firenena Malagasy no jerena ka ampitahaina amin’ny any ivelany dia isan’ny mampanahiran-tsaina ny raiamandreny ny fiatrehany ny ho avin-janany. Hitantsika fa matetika, na efa manam-bady aza ny tanora, efa miteraka aza ny sasany, dia tsy foin’ny raiamandreniny hiala eo anivony, indrindra fa tsy mbola manana asa marim-pototra ilay zanany. Porofo izany fa tena manan-danja amin’ny Malagasy ny taranany, ary tafiditra ao anatin’izany ny tanora.
Ny raiamandreny Malagasy dia mahavita mivarotra ny taninketsany sy ny akoho mikotrika mihitsy, raha izay no antoky ny fahatafita ny taranany. Fahafoizan-tena ange tsy misy toa izany e! Ny akoho mikotrika sy ny taninketsa mantsy no azo sokajiana ho fara-fananana tsy foin’ny Malagasy, nefa dia afoiny izany raha ny ho avin’ny taranany no ho takalon’izany. Noho izany, rariny sy hitsiny raha mahafantatra sy mahatsapa ny olana atrehin’ny tanora ny filohampirenena.
Ny ady hevitra anefa manomboka eo dia hoe “raha mahatsapa an’izany olana izany ny filohampirenena, inona ny politikam-pirenena ho an’ny tanora mba nofaritany sy ny paikady hiatrehany izany mba efa irosoan’ny fitondram-panjakana?”
Manokatra an’io ady hevitra io izahay satria, ialanay tsiny raha manasokajy ny tenin’ny filohampirenena Rajaonarimampianina tao amin’io fandaharana Fotoam-bita io ihany ho toy ny kabary ambony vavahady izahay.
Tsorina ny resaka. Raha ny fandaharan’asa sy paika ady tanterahan’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana ho an’ny tanora aloha dia poak’aty. Manomboka amin’ny fampianarana hatreny amin’ny anjerimanontolo io, ka hatramin’ny fanofanana arak’ asa sy ny resaka politikan’ny famoronana asa. Na efa miasa aza ilay tanora dia mbola itambesaran’ny fahasahiranana ihany satria ny famaritana ny antsoina hoe “asa mahavelona” dia tsy voavalin’ny fepetra nofaritan’ny fitondram-panjakana hatramin’izay ka hatramin’izao mihitsy, raha nisy aloha izay fepetra nofaritana izay.
Raha manao fanadihadiana isika dia hahatafavoaka antontan’isa hoe “mba firy isan-jaton’ny tanora nahavita fianarana moa no misehatra amin’ny asa mba nanokanany ny fotoanany, nandanian’ny ray amandreniny mondrokely, namoizan’ny vahoaka tamin’ny alalan’ny rafi-pirenena vola aman-karena mba hahatafita azy sy hananany mari-pahaizana mendrika ny vanim-potoana amin’izao fotoana?
Ny harem-pirenena mba tokony hiantohana ny ho avin’ny tanora, mba tokony hiatrehana sy hamahana ny olana mianjady aminy, indrindra fa amin’ny famoronana asa, toa itsikombakomban’ny mpitondra fanjakana amin’ny vahiny fotsiny, ka lasa mandady tongotra aman-tanana any amin’ny mpampisambo-bola iraisampirenena mahazatra ny mpitondra. Dia ilay ho avin’ireo tanora sahady no voageja ao anatin’izany satria ny zavatra rehetra mba vitan’ny tanora amin’izao fotoana, izay tsy hahafany mivelatra firy akory, dia ho lasa anonerana ny vola notrosain’ny mpitondra taty amin’ny taona 2018 sy ny talohan’izany amin’ireo mpampisambo-bola mahazatra iraisampirenena. Ny harem-pirenena tokony hiandrandran’ireo tanora ny ho aviny sy ny taranaka aoriana, efa lasa takalom-patsa vidim-pihinanana araka ny politika maloton’ny mpitondra fanjakana.
Izay no mahatonga anay hilaza fa “mpitari-baton’ilay vilam-bava ihany ny ambaran’ny fitondrana raha resaka tanora.